အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: Online မှာလေကျယ်နေတဲ့..စစ်ဗိုဟ်ကြီးတွေဖတ်ဖို့
Online ပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးတွေဆွေးနွေး၊
ပြီးရင် စစ်သားလေးတွေ၊ဆင်းရဲတဲ့ပုံတွေပြပြီး ၊
အာဏာရှင်တွေကို မသိမသာ ကာကွယ်နဲ့..
"တပ်မတော်သား အာက်ခြေစစ်သားများ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့"
Facebook Fan Page တွေထောင်၊
— feeling ငှဲ...ငှဲ...ငှဲ.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:55 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook